Sawirro sawirada moodooyinka adduunka oo dhan - Bilaash
Noocyada kala duwan ee adduunka oo idil
Nooca iyo moodada ayaa noqonaya mid aad muhiim u ah bulshada dhexdeeda. Ku dhowaad qof kastaa wuxuu raadiyaa muuqaalkii ugu fiicnaa, riyadiisa oo ah shakhsi qumman ama ka shaqeynaya si loo yareeyo dareenkooda gaarka ah.
Noocyada kala duwan ee adduunka oo idil - Bogagga qaabka
Hadday muqaalkaas muujinayaan ama hey'adaha qaabaynta - waxaa jira siyaabo badan oo loo bilaabi karo qaab ama ugu yaraan isku day isku day. Si kastaba ha noqotee, haddii mid ka mid ah uu noqdo mid caan ah sida kabtanka ama klum laga yaabo inuu shaki ku jiro.
Waxaanu dadka u soo bandhignaa (!) Fursad ay ku soo bandhigaan sawiradooda
Waxaan ku faraxsanahay inaan kuugu darno sawiradaada meelo ka baxsan. Markaad weydiiso xiriir xiriir la leh website-kaaga. Fadlan nala soo xiriir.
Midabaynta bogaga wadnaha wadnaha
Kala-beedka dabiiciga ah - qurxinta alaabta ka soo baxa beerta